MS PowerToys: Isha Furan ee Adeegga ee Windows 10 Users | Laga soo bilaabo Linux
Tan iyo sanadkii hore, Microsoft ay u diyaarisay dhinacyada xiisaynaya, xirmooyinka qalabka bilaashka ah iyo il furan loo yaqaan MS PowerToys Qalabka loogu talagalay kuwa ugu horumarsan ee taas Nidaamka hawlgalka, Maaddaama ay u oggolaanayso in la fuliyo tiro wanaagsan oo hawlo ah oo aan ku jirin asal ahaan.
Bisha abriil 2020, codsigan waxaa la cusbooneysiiyay 2 jeer horeyba. Markii ugu horeysay 27 maalmood ka hor waayo 0.16.0 version, iyo kii labaad ee 21 maalmood ka hor, loogu talagalay nooca hadda jira 0.16.1.
Sidaad sheegtay bogga rasmiga ah ee GitHub, ayaa sheegay in dalabka lagu tilmaamay:
"Qeybo ka mid ah korantada loogu talagalay isticmaaleyaasha horumarsan si ay u hagaajiyaan una hagaajiyaan khibradooda Windows-ka ee wax soo saar badan. Dhiirrigelinta mashruuca PowerToys ee Windows 95 era, dib-u-soo-nooleyntaani waxay siisaa dadka isticmaala awoodda siyaabo ay uga soo saaraan waxtarka badan Windows 10 oo ay u qaabeeyaan shaqooyinka shaqsiyadeed.".
Waxaa xusid mudan in mashruucan ay qaateen Xeerka Anshaxa ee Furan ee Microsoft (Xeerka Anshaxa ee Furan ee Microsoft). Taasina waa sababta barnaamijkan furan ee furan uu ugu biirayo kuwa kale oo badan oo lagu sii daayay hoosaadkan si loo abuuro loona ballaariyo isticmaalka codsiyada isha furan gudo iyo dibadba wuxuu yidhi Nidaamka hawlgalka.
Ruqsadaha Software Bilaashka ah iyo Furan ee Microsoft
Nidaamyada Hawlgalka ee Dagaalka: Microsoft waxay ka ilaalinaysaa qof walba!
1 MS PowerToys - Qalabka Furan ee Bilaashka ah
1.1.1 Nooca 0.16.0
1.1.2 Nooca 0.16.1
1.1.3 Qalabka ayaa lagu daray
MS PowerToys - Qalabka Furan ee Bilaashka ah
Waxyaabaha cusub ee lagu soo daray qaybtan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Hagaajinta FancyZone: Hagaajinta hirgelinta Multi-Monitor iyo qaab fudud oo loo yaqaan 'UX'.
Adeegyada cusub: Kuwaas waxaa ka mid ah Horudhaca Markdown, SVG Preview, Image Resizer iyo Windows Walker.
Dayactirro cusub: Taasi waxaa ku jira hagaajinta in ka badan 100 dhibaato.
Horumar badan oo la xaqiijiyay: Iyadoo loo marayo tijaabooyin la qaaday.
Adeegyada cusub ee korantada ayaa shaqeeyay markii hore.
Cilad deegaanka ayaa go'an
Dhibaatada RDP ee FancyZones waa la hagaajiyay.
Telemetry ku darida Window Walker si loo xaqiijiyo xaalada shaqeysay.
Qalabka ayaa lagu daray
FancyZones: Maamulaha daaqada oo loogu talagalay inuu fududeeyo abuurista daaqadaha oo adag isla markaana uu si dhakhso leh u dajiyo daaqadaha.
Tilmaamaha toobiye furaha Windows: Tilmaamaha toobiye ee soo baxa marka adeegsaduhu qabsado furaha Windows in ka badan 1 ilbidhiqsi oo muujinaya toobiyeyaasha laga heli karo shaashadda.
PowerRename: Kordhinta Windows Shell, oo u oggolaaneysa raadinta fudud iyo beddelidda horumarsan ama iswaafajinta tibaaxaha joogtada ah ee sahlaya baaritaanka macluumaadka.
Faylasha Faylasha Faylasha: Kaas oo hadda ogolaanaya horay u eegida faylasha cusub ee loogu magac daray: Markdown (.md) iyo SVG (.svg)
Image Resizer: Shell kordhinta oo u oggolaaneysa in si deg deg ah loo beddelo cabbirka sawirrada, iyadoo la siinayo hal guji midig oo fudud oo ku jira Faylka Fursadaha oo u oggolaanaya beddelka cabbirka sawir ka badan hal isla markiiba.
Walker daaqada: Codsi kuu oggolaanaya inaad raadiso oo aad ka beddesho daaqadaha furan, dhammaan kumbuyuutarka. U adeegsiga fallaadho si aad ugu dhex wareegto inta udhaxeysa horudhaca, adoo haya Alt + Tab.
Wixii faahfaahin rasmi ah ku saabsan noocyada hadda iyo mustaqbalka ee tan horumarinta isha furan waxaad toos ugu heli kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan xirmo qalab bilaash ah y il furan «MS PowerToys», oo loogu talagalay adeegsadayaasha aadka u horumarsan ee Nidaamka Howlgalkaas, maaddaama ay u oggolaaneyso in lagu fuliyo qadar wanaagsan oo hawlo ah oo aan ku jirin asal ahaan; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » MS PowerToys: Isha Furan ee Adeegga ee Windows 10 Users
Nooca cusub ee Fedora 32 horey ayaa loo sii daayay, ogow warkiisa
Manjaro Linux 20.0 waxay la timid Kernel 5.6, Pacman 9.4 iyo in ka badan